Xaaladda Xerada General Dhega-badan, ka dib weerarkii isqarxinta (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xaaladda Xerada General Dhega-badan, ka dib weerarkii isqarxinta (SAWIRRO)
Xaaladda Xerada General Dhega-badan, ka dib weerarkii isqarxinta (SAWIRRO)
Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka, General Maxamed Tahliil Biixi ayaa kormeeray Xerada General Dhega-badan ee Magaalada Muqdisho, saacado yar uun ka dib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay xeradaasi.
Nin xirnaa jaakadda ka sameysan walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay dhalinyaro xilligaasi safafka ugu jiray afaafka hore ee xeradaasi, si loogu diiwaangeliyo ka mid noqoshada Ciidanka Kumaandooska Gorgor.
Weerarkan oo Al Shabaab sheegatay ayaa waxaa ku dhintay 11 ka mid ah dhalinyaradaasi, dhowr iyo soddon kale way ku dhaawacmeen.
Taliyaha Ciidanka Dhulka iyo Saraakiil kale oo la socotay ayaa kormeeray xeradaasi, si ay ugu kuurgalaan xaaladda xerada, ka dib weerarkii maanta.
Taliyaha iyo Saraakiishii kale ee la socotay ayaa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyay Taliyaha Dugsiga, General Maxamed Maxamuud Saney.
General Maxamed Tahliil Biixi, Taliyaha Ciidanka Dhulka ayaa xerada gudaheeda kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka badbaaday qaraxaasi.
Waa ismiidaamintii labaad oo Shabaabku ka gaystaan Xerada General Dhega-badan, wax ka yar afar sano. 4-tii bishii October ee sanadkii 2017 ayay ahayd markii nin isa soo miidaayay uu isku dhex qarxiyay xeradaasi.
Previous articleWasiir Xaaji “Waan sii wadeynaa qoridda dhalinyarada ku biireysa ciidamada”
Next articleKenya oo weli dhibaato xoog leh ka waddo Gobolka Gedo